China Ibhedi emhlophe esetyenziselwa izinto ezahlukeneyo Iibhedi eziqinileyo zegumbi lokulala # 0113 Ukwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
I-White Oak enemisebenzi emininzi yokulala iibhedi eziqinileyo zegumbi lokulala # 0113
Igama: Ibhedi yokulala
Inombolo yomzekelo: Amac-0113
Ubukhulu: 1570 / 1870mm * 2100 * 890mm
Ibhedi yenziwe ngomthi oqinileyo
I-oki emhlophe engeniswe eMntla Melika inobungqingqwa obuqinileyo, ukuhlala ixesha elide kunye nokuqina okuhle. Ngomnye wemithi ephezulu kwaye ulunge ngakumbi kunama-oki abomvu kwimarike. Ingqolowa yeenkuni icacile kwaye ikhanya, iinkuni ziethe-ethe kwaye zendalo, zilele kuyo, ngokungathi usemkhulu Ekuhlanganeni kwendalo, abantu banokulala ngoxolo. Ibhedi yeenkuni eqinileyo eyi-100% ayinayo imigca eyongezelelweyo. Inobume beklasikhi ngokwenene, isazela sokwenene, isakhiwo esomeleleyo, kunye novavanyo olusemthethweni lokujonga iminyaka engama-50 yomelele.
Isakhelo somqolo weplanga esomeleleyo sanele ukuthwala ubunzima bosapho. Le bhedi iphindwe kabini inesakhiwo esomeleleyo kwaye ipasile kuvavanyo loxinzelelo loxinzelelo lwe-tuli. Awudingi ukuba nexhala malunga nokuzinza kwenkxaso kwaye ulale ngoxolo. Isakhelo somqolo senziwe nge-oki emhlophe eyomeleleyo, eneebhotile ezimbini. Xhasa imilenze ukuxhasa umatrasi ngokuqinileyo.
Isiseko esisecaleni kwebhedi
Iziseko zokhuselo ezakhelweyo entlokweni yebhedi, iziseko ezigcwalisekayo uxinzelelo. Ubuncinane emva kwemijikelo emine Kuphela "ngoqeqesho" olunobuchule endinokuhlangana nawe. Yomeleza ulwakhiwo lwe-tenon kunye ne-tenon, kunye nomthamo wokuthwala umthwalo uzinze ngakumbi.
Umgangatho ophezulu wehardware ebunjiweyo
Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zibopha umzimba ebhedini, eqinile kwaye yomelele, akukho lula ukurusa, kwaye umandlalo wokhuni olomeleleyo unamandla okuthwala. Indawo ethe cwaka yokuziva ikhusela iplanga kunye nomphezulu webhedi ekuthambiseni, kwaye ulala ngaphandle kokuphazanyiswa yingxolo, ukuvumela ukuba ulale ngokulula. I-backrest enkulu inokutshatiswa ngokukhululekileyo Umqamelo ukhululekile ukuthembela kuwo, kwaye ukudlala kwifowuni akukwenzakalisi amehlo akho.
Bold imilenze enye yebhedi
Umazantsi webhedi uxhotyiswe nge-T-beam, izixhobo azicacanga, kwaye zenziwe ngomthi oqinileyo, inkxaso kathathu, uxinzelelo lwebhedi yi-MAX, akukho kujika, kwaye ukulala kuqinisekisiwe. Imilenze yebhedi iyajiya, akukho lula ukuyishukumisa, kwaye akukho lula ukuyaphula. Eyilwe emva kophando oluninzi Ngokuphakama kwebhedi efanelekileyo, abantwana banokuhlala ngokulula kuyo, kwaye kukho indawo eninzi emazantsi ukuze ubeke izihlangu, njl.
Iinkuni ezilula zanamhlanje zilula
Ibhedi eqinileyo yomthi enokubonakalisa umoya wobukrelekrele ekukhetheni izinto ukuya kwimilo
Sijonge izinto ezisetyenzisiweyo kwihlabathi liphela
Ukhethwe ngononophelo kwaye ufumene oki emhlophe esemgangathweni ophezulu
Ukwenza nje obu buchule bucocekileyo
Ukulula kunye nokusebenziseka kuyafana nayo
Egqithileyo Ihowuliseyili inflatable yoga mat ixabiso kwezemidlalo air track Gymnastics Tumbling Mat Air Floor 0393
Okulandelayo: Ibhedi elula yeWindsor Solid Wood Bedroom Bed Princess Princess # 0114
Sawa Surfboard Sup Racing Yoga nesimbo Boa ...
Uqeqesho lweTaekwondo loMatrasi womoya othandekayo ...
I-Aeliana encinci yezilwanyana Hutch eneRamp 0243
Igumbi lokuhlala ifenitshala yesikhumba yomthi oqinileyo ...